Semalt विशेषज्ञ संग वेब स्क्रैपिंग
वेब स्क्रैपिंग, वेब कटाई को रूप मा जानिन्छ, वेबसाइटहरूबाट डेटा निकाल्नुहोस्। वेब फसलिंग सफ्टवेयरले वेब सीधा HTTP वा वेब ब्राउजर प्रयोग गरी पहुँच गर्न सक्छ। जबकि प्रक्रिया सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताद्वारा प्रक्रिया लागू हुन सक्छ, प्रविधि सामान्यतया एक वेब क्रलर वा बोटको प्रयोग गरी लागू स्वचालित प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ।
वेब स्क्रैपिंग एक प्रक्रिया हो जब संरचित डेटा वेबबाट एक स्थानीय डेटाबेसमा समीक्षा र पुनःप्राप्तिको लागि प्रतिलिपि गरिएको छ। यसमा एक वेब पेज प्राप्त गर्दै र यसको सामग्री निकाल्दै समावेश छ। पृष्ठको सामग्री पार्स गर्न सकिन्छ, खोजिएको, पुन: निर्माण गरिएको र यसको डेटा स्थानीय भण्डारण यन्त्रमा प्रतिलिपि गरिएको छ।
वेब पृष्ठहरू सामान्यतया पाठ-आधारित मार्कअप भाषाहरू जस्तै XHTML र HTML को रूपमा बनाइएका छन्, जसमा दुवै पाठको रूपमा उपयोगी डेटा समावेश गर्दछ। यद्यपि, यी धेरै वेबसाइटहरू मानव अन्त-प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन र स्वचालित प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छैन। यो कारण स्क्रैपिंग सफ्टवेयर सिर्जना गरिएको थियो।
त्यहाँ धेरै प्रविधिहरू छन् जुन प्रभावकारी वेब स्क्रैपिंगको लागि रोजगारी हुन सक्छ। तीमध्ये केही तल वर्णन गरिएको छ:
(1 9) 1. मानव प्रतिलिपि-र पेस्ट
समय-समयमा, यहाँ सम्म कि सबैभन्दा राम्रो वेब स्क्रैपिंग उपकरण एस प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। मानवको म्यानुअल प्रतिलिपि-र-पेस्टको शुद्धता र क्षमता।.यो वेबसाइटमा स्वचालित रूपमा यन्त्र स्वचालनलाई रोक्न बाधाहरू सेट गर्दा यो अवस्थाहरूमा लागू हुन्छ।
(1 9) 2. पाठ ढाँचा मिलान
यो वेब पृष्ठबाट डेटा निकाल्न प्रयोग गरिने एकदम साधारण तर शक्तिशाली तरीका हो। यो UNIX ग्रीप आदेश वा दिइएको प्रोग्रामिङ भाषाको केवल एक नियमित अभिव्यक्ति सुविधामा आधारित हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, पाइजोन वा पेरल।
स्थिर र गतिशील वेब पेजहरु को लागि HTTP प्रोग्रामिंग को उपयोग गर्न सकिन्छ। डेटा सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंगको प्रयोग गर्दा HTTP अनुरोधहरू टाढाको वेब सर्भरमा पोष्ट गरिँदै निकालेको छ।
(1 9)4- gestion de projet cours pdf excel. एचटीएमएल पार्सिङ
धेरै वेबसाइटहरूमा डाटाबेसको एक विस्तृत संग्रह हुन्छ जुन गतिशील संरचना स्रोत जस्तै डेटाबेसमा सिर्जना गरिएको छ। यहाँ, त्यहि कोटिको डेटा जुन समान पृष्ठहरूमा इनकोड गरिएको छ। एचटीएमएल पार्सिङमा, एक प्रोग्रामले सामान्यतया यस्तो टेम्प्लेटको जानकारीको एक विशेष स्रोतमा पत्ता लगाउँछ, यसको सामग्री पुन: प्राप्त गर्दछ र त्यसपछि यसलाई सहबद्ध रूपमा अनुवाद गर्दछ, उल्टो भनिन्छ।
(1 9) 5. डोम पार्सिङ
यस प्रविधिमा, प्रोग्रामले पूर्ण ब्राउजर वेब ब्राउजरमा सम्मिलित गर्दछ जस्तै मोजिला फायरफक्स वा इन्टरनेट एक्सप्लोरर क्लाइन्ट-साइड लिपि द्वारा निर्मित गतिशील सामग्री पुन: प्राप्त गर्न। यी ब्राउजरहरूले वेब पृष्ठहरूलाई एक डोम रूखमा पार्ने कार्यक्रमहरूमा निर्भर गर्दछ जुन कार्यक्रमका भागहरू निकाल्न सक्छ।
(1 9) 6. सांप्रदायिक एनोटेसन पहिचान
तपाईंले स्क्रैप गर्न मनपर्ने पृष्ठहरू semantic markups र एनोटेशन वा मेटाडेटा, जुन विशिष्ट डेटा स्निपेटहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि यी एनोटेसनहरू पृष्ठहरूमा सम्मिलित छन् भने, यस प्रविधिलाई विशेष रूपमा DOM पार्सिङको रूपमा देखा पर्न सक्छ। यो एनोटेसनहरू पनि सिंकैक्टिक लेयरमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि वेब पृष्ठहरूबाट अलग र भण्डार गरिएको र व्यवस्थापन गरिन्छ। यसले पृष्ठहरू स्क्रैप गर्नु अघि स्केपर्स डाटा स्कीमा साथै यस तहबाट आदेशहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।